SHEEKADII CALI MA'OOYAAYE
Cali oo ahaa nin riyadiisu ay tahay inuu Baylood noqdo, ayaa waxay noqotay in riyadiisii ay rumoowdo, oo uu kadib tababar & tijaabooyin badan dhulka Soomaaliyeed gudihiisa uu ku sameeyay tijaa booyinkaasoo loogu tala galay (in lakala ogaado in baylood kastaa dagaal aadi karo iyo inuu mid cabsadaa yahay). Cali wuxuu noqday mid iska qoslaa
“Oohaa-haa-haa,Ooha-haa-haaaa-haaaa, Uud Uud Uud’’ mar alaale iyo markuu duulayaba.
Maalin ayaa Cali loo diray inuu soo dagaal galo, oo dal kale soo rusheeyo “burburiyo”, Cali & shan kale oo hubaysan diyaaradahoodiina wata ayaa la’isku daray inay xirfad dagaal soo fuliyaan. Lamafilaan Cali markuu dagaalkii aaday ayuu wuxuu la yaabay siduu dagaalku udhacyo. Dabadeedna Cali wuxuu arkay guryo dadkii lahaa ay ka dumiyeen saaxiibadiis ayagoo aad u rusheenaaya, Calina intaas ay saaxiibadii wax laynaayeen isagu wax muu dilin, muuna dumin, mana toogan, balse waxa lagu soo rido ayuu u goo’goynaayay (oy tahay isagaa weerar ah iyana waa difaac). Wakhti badan markuu Cali sidaa udaawanaayay, ayuu bilaabay inuu kanaxo, dadka hoostiisa jooga sida loo baa’bi’inaayo, dabadeed isagoo qaylinaaya ayuu Cali yiri “war cadowgii udhamaataye inakeena dalkeenii ku noqonee, shacabkana ha’laynina”. Dhawr jeer ayuu Cali sidaa ku celceliyay isagoo saaxiibadii Hallo-Hallowga kula hadlaya, balse maynan ujawaabin oo waa la’iska dhaga tiray. Cali si lamafilaan ah ayuu hadaba saaxiibadi ugu soo kala fireeyay oo bilaabay inuu ayagii xabadeeyo, oo ay qaarkood cara reen qaarkoodna ay diyaaradahoodii qar qarxeen , Calina isna kasoo daba cararay dhinacaas iyo Soomaaliya, ileen waa intuu rabaye.
Cali ma’ooyaaye wuxuu sii duulaba, habeenimadii ayuu Soomaaliya kadagay. Ayadoo ay halkaa ku sugayaan dad badan oo soodhawayntooda sugayay, Cali waxaa lagu waraystay Eeriboorka Soomaaliya, isagoo faraxsan qoslaayana, dhinacna kanaxsan kana ooyaaye
(Oo haa-haa-haa, Ooha - haaaa-haaaa, Uud Uuud -Uuud ). Cali waxaa lawaydiiyay : “dagaalku siduu ahaa?” wuxuuna ku jawaabay, “dagaalku iska caadibuu ahaa, inkastoo saaxiibaday…” . Markuu intaas ku jawaabay, ayaa lawaydiiyay saaxiibadii bal meesha ay ku danbeeyeen, wuxuuna ku jawaabay “Saaxiibaday way iska fiicnaayeen markii iigu danbeeysay”, “Hadese xagey ku sugan yihiin?” ayuu wariyihii ku celiyay, wuxuuna yiri “Ana diyaarad baan watay , iyana sidoo kale, dagaalkii markuu dhamaadayna , oo cadowgiina aanu baabi’inay ayaanu go’aansanay, inaanu soo baxno, kadibna waanu soowada baxnay , hadana siday u muuqato anaa kasoo horumaray”.
Su’aaluhu way adkaayeen Calina wuu daalanaa , dadwaynihii soo dhawaynayay iyo kuwii waraysigiisa idaacadaha kala socdayba waxaa galay shaki, waxayna bilaabeen dadkii meesha joogay oo sugayay Cali nimankii lamid ahaa in ay qayliyeen oo su’aalo badan oo kale ay sii waydiiyan. Su’aalahaas oo runtii u badanaa kuwo qalafsan, nasiib wanaagse Cali hurdaa ugu baxday kursigii lagu waraysanayay, kadibna waxaa Cali loola cararay dhinacaas iyo gurigiisii.
Habeen barkii ayadoo la joogo oo walina laga warsugayo, nimankii Cali lasocday inay weerarkii kasoo laabtaan, ayaa diyaarad qiiqaysa kasoo muuqatay dhinacaas iyo galbeedka Soomaaliya. Dabdamisyo ayaa loo diyaariyay waxaana lagula hadlay Hallo-Hallowga ayadoo loogu baaqayo inuu diyaarada Bayloodku kuhago dhinacaas & Eeriboodka C/Waaq ( Oytahay ujeedadu inay haday diyaaradu Qaraxdo (masalan), ay ku dhacdo Xurfada wayn ). Hadaba Cali Ma’ooyaaye Talafishinka ayuu kala socday dhacdo kasta, ilaa ay aakhirkii diyaaradii ka cagodhigatay Eeriboodka wayn ee Caabudwaaq, si nabad ah oo ay halkaa ku damiyeen Qiicii ka holcayay, Damdamisyaasha loogu talogalay inay qaboojiyaan wixii gubanaya. Cali Ma’ooyaaye isagoo og wuxuu soo dhimay wakhtigii dagaalka loodiray, oo uu saaxiibadii usoo dhimay. Waxay ahaataba hurdadiisii ayuu kasii watay.
Diyaaradii cagodhigatay Eeriboodka magaalada Caabudwaaq, aad ayuu khasaaro wayn usoo gaaray, balse bayloodkii waday wuu badbaaday. Waxaa waxyaroo gubniin ahi soogaaray waa baylood kuxigeenkii diyuuradaas. Labadii bayloodba Isbitaalka wayn ayaa loola orday si loo daryeelo, waxaana loo diiday inay wax waraysi ah layeeshaan Wariyeyaasha goobtaas yimid. Inkastoo ay shabakadaha Idaacaduhu saarnaayeen indhaha Isbitaalkaas sinaba loogama war la’ayn xaalada ay baylood-yadu kusugnaayeen.
Subaxnimadii ayaa wasiirka difaaca Mudane Gaxayte kusoo booqday Isbitaalka magaalada Caabudwaaq, isagoo dhiirigalinaya bayloodyada hawsha ay dalkooda usoo qabteen, uuna halkaa Mudane Gaxayte salaan uu uga waday Madaxwaynaha Jamhuuriyada Dimuquraadiga ee Soomaaliya Jaale Galaydh uu ugu gudbiyay nimankaas. Waxay hadaba wariyayaashii goobtaas joogtay ku waraysteen Mudane Gaxayte Isbitaalka dibadiisa, su’aashii ugu horaysa waxay ahayd: “Mudane Gaxayte xaalada nimanku xagay kusugantahay?”, wuxuuna ku jawaabay Gaxayte “Labada bayloodba aad ayuu Caafimaadkoodu uwacanyahay, dhawaana wayka soo bixi doonaan Isbitaalka”, “Goorma ayay kasoo bixi doonaan Mudane, yacnii wakhtigee?”, ayuu wariyihii waydiiyay, “Sida ugu dhakhsaha badan ayay uga soo bixi doonaan Isbitaalka. Mar2aadn ayaan geesinimadooda uga mahad celinayaa, shaqaalaha isbitaalkana hawshooda aan uga mahad celinayaa”. Mudane Gaxayte waraysigiisii kadib wuxuu diyaarad usii raacay dhinacaas iyo Muqdisho oo uu uanbobaxay. Sheekada hadaba Soomaaliya oo dhan la’isla dhexmar-maraayay, waxay ahayd “Cali Ma'ooyaaye xagee kusugan yahay, muxuuse u hadli la’ayahay”.
Wakhtigu waa 12kii duhurnimo maalintuna waa Arbaco, hadaayoo kalena magaalada Xamar gurikasta iyo reerkastba waa xili qado loo wada fadhiyo, oola wada daalanyahay. Waana caadiyan goor loowada fadhiyo in Talafishinku warka uusoo tabiyo ladaawado, laakiin maanta Idaacadu war muhiima ayay sheegtay. Talafishinku wuxuu maanta xayasiiyay in uusoo siidayn doono maalinta Jimcaha ah Barnaamij ku saabsan dagaalkii ayka soo noqdeen Cali Ma'ooyaaye iyo nimankii gadaashiis yimid.
Isla maalintaas waxaa kaloo idaacadaas laga sheegay war aanan laxaqiijin, warkaasoo laga soo xigtay idaacada Shiinaha sheegayna in Cali Ma'ooyaaye iyo Saxiibadiiba ay NSSta qaybta Hangashtu baaritaan qarsoon ay ku bilaabeen, sheekadaas oo aad looga yaabay.
Cali Ma'ooyaaye isagu waxaa uu sadex bari ku jiray gurigiisa magaalada Xamar ee uunana dibada uga soo bixin joornaaliistayaasha tooban awgeed. Waxaa uu kacodsaday wasiirka difaaca Mudane Gaxayte inuu Booliis usoo diro si uu xoriyad uu banaanka ku marmaro uhelo. Mudane Gaxayte wuuka aqbalay una sheegay Cali in uu ka warsugo 20daqiiqo gudahood. Intaysanse Booliiskii Gaxayte Cali soo gaarin waxaa kasoo horumaray niman aad ulabisan oo Aqoonsiga Hangashta wata. Cali Ma'ooyaaye markuu arkayna, waxa uu go’aansaday inuuna albaabka ka furin, wuxuuse ku yiri “fadlan waxyar isuga, waan qaawanahaye intaan soo labisanayo”. Irida danbe ayuu kasii baxayay intay NSStii iyo Joornaalistayaashiiba ay Iridiisa hore taagnaayeen. Cali Ma'ooyaaye intuu fakanayay hadaba waxaa dariishad ka arkay Islaan dariskiisa ahayd ee uu necbaa. Islaantaas oo runtii Cali nafta ukeeni jirtay, mar ay ashtakeeyso iyo mar ay lug-gooysaba, Calise markuu arkay, waxay samayn doontana uu ogaa wuxuu kasii watay baxsashadiisii.
Dhowr iyo toban daqiiqo markay sugayeen inuu Cali usoo laabto Hangashtii irida kusugaysay, waxaa albaab kasoo baxay Islaan aad da’a uah luudaysana, waxay soo gaartay cabaar kadib goobtii ay nimanku kusugayeen Cali Ma'ooyaaye, waxayna islamarkiiba ku dhawaaqday “Albaabka danbe ayuu ka-baxay ninkaad sugaysaan”.
Marakay intaas tiri uuna taliyihii Hangashta ku dhawaaqay “Hala haraareeyo guriga iyo xaafadaan oo dhan”. “Wax la haraareenayo iyo wax la galayaba majiraane, halagu kala tago goobta”, ayaa waxaa yiri nin aad iyo aad codkar uah, oo wata guuto Booliis ah. “Oo yaa idinsoo diray” ayaa uu yiri ninkii Hangashta watay, “waxa nasoo dalbay waa Mudane Gaxayte, inay NSStu timaadana maaha, meel Booliis loosoo diray”.
Hadaba muran badan kadib, markii danbe markay is af-garteen labadii taliye ayay go’aansadeen inay meesha ku kala tagaan, islagoobtaasna oo ay joogeen joornaaliistayaashu ayagoo dhacda kastaa duubaya. Talafishinada qaarkoodna waxaa looga daawanayay Toos.
Cali Ma'ooyaaye iyadoo aytahay xili minasubax ah ayuu fakaday wakhtigaas , wuxuuna islamarkiiba helay gaari usii socda dhinacaas iyo Mudug. Isagoonan waydiin dhinacay Mudug ka’aadayaan ayuu Cali gaari kamida gaariyaashaas kusii booday. Cali Ma'ooyaaye ma’uusan wadan boorsadiisii lacagta wakhtiga uu gaarigaas Mudug usii shiraacan sii raacayay.
Mar uu gaarigu sii marayo Balcad ayaa darawalkii baabuurku waydiiyay inuu bal Cali hada kahor meel ku arkay, Calina waxa uu yiri: “Qofkalaad igu khaldaysaa ileen Soomaalidu way isku egtahaye”, darawalkii wuxuu kuceliyay “Runtii nin aan dhawaan arkay oo Caan ah baad iila egtahay, laakiinse maashii aan kugu arkay ayaan soosaari la’ahay”. Su’aashaas dhowr jeer ayuu kusoo celceliyay darawalku, Calina wuu inkirayay in ninka lasheegayo isaga yahay, markii danbana sheekadiiba waxaa badalay Naag uurleh oo baabuurka loo istaajiyay.
“Lacag, lacag, lacag” ayuu yiri kirishbooygii baabuurka saarnaa, Calise Shirka baabuurka maadaamuu kujiray wuu maqli karay in baabuurka dhaladiisa lacag aruuris laga bilaabay. Cali Ma'ooyaaye maadaamuu kusoo baxay si kadis ah, shilin & taano iskuma furto, boorsadiisii lacagtana gurigii ayuu uga soo tagay.
Cali Ma'ooyaaye markuu arkay inuu baxar kujiro, mar aan fogayna kirishbooygu lacag uu su’aali doono, ayuu bilaabay inuu ku fakaro sidii uu tilaabo uqaadi lahaa. Intuu fakarayay ayaa waxaa kasoo galay Raadiyihii darawalka ushidnaa War, kaasoo oo ay qodobadiisa ugu doorka roonaana ay kubilaawdeen sidan: “Saaka ayaa magaaladatan Muqdisho xaafada If & Aakhiro laga soo waramay in ay Booliiska isla xaafadaas ay raadinayaan Bayloodka magaciisa layiraa Cali Ma'ooyaaye oo ka tirsanaa…….”. Markuu warku intaas sheegay ayuu Cali kubooday raadyihii oo uu damiyay, si’uunan darawalku tilmaamta ninka fakaday uunan umaqal. “Maxaad udamisay War cusub ayaa lasheegayaaye” ayuu darawalkii ku qayliyay, isagoo laamiga hortiisa ahna baabuurada kale iska dhowraya. Cali ma’uunan iswaaline waxa uu bilaabay inuu qoslo “Oo haa-haa-haa, Ooha - haaaa-haaaa, Uud Uuud -Uuud “. Markuu darwalkii arkay Caliyoo qosol lasuuxay ayuu isna ka barbar qoslay, dabadeedna waxaa baabuurkii uu istaagay Makhaayad Safaradu ay waxka cunaan, kuna nastaan, wuxuuna kirishbooygii soo hoos istaagay Cali isagoo oranaya “Lacag, lacag, lacag”.
Madaxwaynaha Jamhuuriyada Dimuquraadiga (MJD) ee Soomaaliya Jaale Galaydh ayaa waxa uu wasiiradiisa isugu yeeray casho sharaf uu usameeyay dabaaldaga maalintii ayka soowareegatay markii Xornimada laqaatay habeenkeedii. Waxaana ay maalintaasi kusoo aadantay iyadoo ay shacabka Soomaaliyeed wali layaaban yihiin meesha uu Cali Ma'ooyaaye ufakaday, iyo iyada oo baadigoobkiisa laga wada dareemay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Wax ay ahaataba Madaxwaynuhu sidii caadiyanba uahayd ayuu cashadaas oo lagu yeeshay Huteel Curubo kadib qudbad ka jeediyay Talifisiyoonka. Qudbaduna waxay ahayd tu aan laga dareemin Siyaasada dawlada iyo muuqaalka Madaxwaynaha, inay baryahaanba waxjireen iyo inkalaba.
Isla hadahaas uu Jaaluhu qudbadeenayo waxa uu Cali Ma'ooyaaye kala socdaa idaacada, nasiibwanaagna wax isaga kusaabsan madaxwaynuhu ma’uusan ka hadlin. Guddi uu shacabka Soomaaliyeed isla maalmahaas uu Cali fakadayba iska abaabulay, ayaa wuxuu usoo dirsaday Talafishanka (qudbadii Madaxwaynaha kadib) Ergo ka turjumaya dareenka shacabku kusugnaa baryahaanba, waxaana uu Af-hayeenkoodii ka yiri idaacada sidatan: “Waxaa halkaan ay sharafwayn iitahay inaan ra’ayiga shacabka ka gudbiyo, anagoo…..” “Maxaad ugala jeedeen markaad leedahay ra’ayiga shacabkaan gudbinaynaa? Maxaadse tihiin idinku?” “Waan soo waday hadalka idigaa iga dhexgalay maahee, waxaan anagu nahay Guddi la’aas aasay mudo waxyar laga joogo, waxaana ay muhiimadeenu tahay inaan waxay dawladu qarinayso banaanka ay inay soo dhigto, aanu ku taxaluujinaa”. “Dawladu maxay qarinaysaa oo aad soosaari doontaan?”. “Dawladu wax aanan yarayn bay shacabka indhihiisa ka daboolaysaa, wax kastana waa waajib inaanu lasocono hadaanu nahay Soomaali dawladuna tahay dawlad Soomaaliyeed”.
Waraysigaasi kadib ayaa waxaa Idaacaduhu misna waraysteen, Ergo ka socda dawlada dhinaceeda, waxaana waraysigaasi ay Af-hayeenkaasi wariyayaashu uwaraysteen sidaan: “Mudane waad lasocotaa inaan makhribkii waraysi aanu kasiidaynay ah Ergo ka turjumaya dareenka shacabka gudihiisa kajira, dawlada ayuuna dhaliilo badan usoo jeediyay marka maxaad ku qancin lahayd shacabka uu Ergigaasi matalayay?”. Markuu intaasi yiri waxaa ka muuqday Af-hayeenka dawlada wajigiisa is badal, wuxuuse ku jawaabay: “Een waxa weeye, dawladu ma’uwarla’a in ay shacabka gudihiisa dareemo kala gadisan ka jiraan, balse waxaa mihiima in lala socdo dawladu inayna shaqo la’aan fadhiyin maalmahaanba, waxaase kaloo dawladu diidantahay inay si dhakhso ah uga gaarto gunaanad, wax iyaguba biloow ah.” “Mudane maxaa biloow ah mar haday sheekadani siimarayso mudo hada laga joogo 2bilood”. Ayuu wariyihii su’aalay, wuxuuna ku jawaabay Af-hayeenkii dawladu hadal siyaasadeed aanan qancin dhinacna.
Soo gaabin Qaybihii Hore ah
( *Kadib markii uu Cali Ma'ooyaaye iyo baabuurkii uu lasocday ay tageen Tuula yaroo ay Makhaayadi ku taalo si ay ugu nastaan. Waxaa Cali soo hoos istaagay kirishbooygii gaariga isagoo “Lacag, lacag, lacag” odhanaya . Cali Ma'ooyaaye lacag uu xitaa waxku cuno ma’uusan wadan, wuxuuse ku fakaday in darawalkii uu yiraahdo “Ninkaas lacag lagama qaadayo”. Calina inta uu qoslay ayuu yiri: “Mayee, waan bixinayaa, seeweeye”. Wayka muuqatay inuu Cali kalsooni isku qabay aanan lacag looga qaadayn, ilamaa xitaa Qadadii laga bixiyay isgoonan laga shakiyin.
Maalintaas Cali Ma'ooyaaye iyo saaxiibkiisii cusbaa ee darawalka ahaa aad ayay meeshaas wakhti badan ugu dhumiyeen, uunan xitaa darawalku safarkan mid lamida tuuladaan xili badan uusan ku dhumin).
Waxaa hadaba jirtay inay NSStu baaritaankii ay wadeen inay sii balaariyeen ilamaa ay uxilsaareen Taliye Hangashta ka tirsan taariikh wayna kaleh agtooda. Taliye Gamuumoow wuxuu caadiyan dagan-yahay magaalada Hargaysa. Xaga NSStana ixtiraam aad uwayn ayuu kaleeyahay, hawluhuu fuliyay iyo taariikhdiisa markii dib loo fiiriyo. Waxaa dhacday in waa hore ay jirtay sheeko wayn oo ay Booliiska iyo NSStu isku qabteen, dabadeedna Booliiskii ku ceeboobeen kiiskaasi. Taasoo aad siyaasada Dawlada udiciifisay ayna ka danbeeyeen NSStu inay dawladaasi jirtay ay sidaasi ku dhacdo, lana doorto dawlad cusub. Hadaba Mudane Gamuumoow wuxuu kamid ahaa ragii shaxdaasi dagay, kuna kalifay inay Booliiskaas ceebi ayka qabsato, isla dawladaasi oo uu Booliisi xukumi jirayna ay sidaasi ayku dhacdo. Laguna doortay dawlad cusub taasoo ay NSStu tiirar waawayn utahay xiligaan la joogo.
Islamarkii shaqada loo xilsaarayna Elikobtar ayuu Gamuumoow kasoo qaatay Hargaysa si uu duulimaad balaaran ugu fidiyo Soomaaliyoo idil haday ka fursan waydo. Hadaba Cali wuu ogaa dawladu waxay awood uleedahay iyo waxayna ulahayn, wuxuuna go’aansaday inuu darawalkii su’aalo meesha ugu danbaysa oo uu Safarkiisu ku danbeeyo. Darawalkiise waxa uu Cali Ma'ooyaaye usheegay inuu Mudug oo dhan sii mari doono, uuna ka soo noqon doono Gaalkacyo. Cali Ma'ooyaaye hadaba meesha uu usii socday waxay ahayd Caabudwaaq oo ay Hooyadiis joogto iyo walaalihiis. Wuxuuna go’aansaday inuu baabuurka ka’haro, iyadoona uu mar usocon Caabudwaaq marna ay Hangashtu dabagoobkiisa ayka soo heli karto baabuurka uu wali saran yahay.
Cali waxa uu saaxiibkiis ku yiri: “Musqushaan galayaaye iga raali noqo”. Cali oo ay arintiisu ka waynayd musqul, wuxuu usii galay tuuladii horay, mana macsalaamayn saaxiibkiis qaaliga ahaa, maadaama uusan kalsooni wayn ku qabin, uuna fakad ahaa.
Waysii socon doontaaye Lasoco (Qaybtii 7aad)
Bayjka Saldhiga ah
Copyright (c) 2000 Soomaaliya Ha'israacdo & Xaaji's Homepage, Inc All Rights Reserved